facebook.com | WARSOM.COM - Wararka Soomaaliya,warka soomaaliya,Somalia News | Page 758
Home facebook.com Page 758
Maxkamada Ciidamada Qalabka Sida ee Jubaland oo Maanta Sadex Ruux Dil Ku Fulisay.
Degmada Buuhoodle oo afar qof ugu geeryoodeen cudurka shuban biyoodka.
KHalalaasaha KHaliijka oo ay xal u raadinayaan M/weynaha Mareykanka Trump iyo kan Turkia Erdogan.
M/weynaha Dalka Ciraaq oo Ka Tanaasuley Dhalasho uu Ka Haystey Dalka Ingiriiska iyo Sida Loo Arkey.
Qaar kamid ah gobolada S/land ee ay Abaaruhu saameeyeen oo hay’adda Direct aid deeq wax ku ool ah gaarsiisey.
Hay’adda gaargaarka ee Dirrect Aid, ayaa maanta deeqo Gaadjsiiyay Gobollada Awdal, Selel iyo Degmooyin hoos-yimaada Gobolka Maroodi jeex, waxaa iskugu jireen biyo iyoraashin. Guddoomiyaha Hay’adda Dirrect Aid, Xasan Badawi iyo Mas'uulka Sare ee Hay’addaan, Maxamed Aadan Askar ayaa sheegay inay deeqan ka bilaabeen deegaannada Hargeysa ka xiga dhinaca Koonfurta, oo...
Dagaal yahanada Al-shabaab oo isaga baxey Degmada Ceelwaaq.
Wararka naga soo gaaraya degmada Ceelwaaq ee gobolka Gedo ayaa sheegaya in ay isaga baxeen dagaalyahanno ka tirsan Al-shabaab kaddib weerar xalay ay ku qaadeen degmada. Saraakiisha ciidammada dowladda Soomaaliya ee ku sugan degmada Ceel-waaq ayaa warbaahinta u sheegay in hadda ciidammadooda gacanta ku hayaan degmada. Col Warfaa Sheekh Aadan oo...
Madaxweyne kuxigeenka dalka Ciraaq iyo gudoomiyaha barlamaanka soomaaliya oo ku kulmey magaalada Baqdaad.
Guddoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya, Muxammad Sh. Cusmaan oo booqasho ku jooga magaalada Baqdaad ee xarunta dalka Ciraaq ayaa kulan la qaatay madaxweyne ku-xigeenka Dalka Ciraaq, Iyad Allawi. Kulankan oo ka dhacay xarunta safaaradda Somalia ee dalka Ciraaq ayaa waxaa goob-joog ka ahaa; Xoghayaha guud ee Baarlamanka Somalia, C/kariin X. Cabdi...
SH/hoose oo ay ciidamada huwantu ka geysteen duqeyn laguna diley saraakiil AL-shabaab ah.
Ugu yaraan Shan ruux oo xoogagga Al-shabaab ka mid ah, ayaa la sheegay in lagu dilay duqeyn ay diyaarado Helicopter-ro ah ka geysteen Deegaanka Furuqley oo qiyaastii 25-km dhinaca Waqooyi kaga beegan Degmada Afgooye ee Gobolka Shabeellada Hoose. Duqeyntaan oo dhacday shalay oo Jimco ahayd, ayaa lagu beegsaday Goob ay qaar...
Soomaaliya oo Mareykanku Sheegay in Ugu Deeqayo Adduun Lacageed Gaaraya $900 Million.
Safiirka Mareykanka ee Soomaaliya Donald Yamamoto oo maanta soo saaray war saxaafadeed ayaa sheegay in Soomaaliya ay siin doonaan adduun lacageed oo gaareya $900 million oo lagu maalgelinayo Soomaaliya. Dawladda Mareykanka ayaa sheegtay in Soomaaliya ay ka caawin doonaan dhanka, gargaarka bani’aadanimada, dhismaha hey’adaha dowliga ah, waxbarashada, caafimaadka, garsoorka shaqo...
4-Nin Oo Kufsi Iyo Dil U Geestay Gabar Ardayad Ah Oo Lagu Dad-dalay Dalka Hindiya.
Afar Nin oo lagu helay inay kufsadeen kadibna dileen Gabar ardayad ah magaaladda Delhi ee wadanka Hindiya Sanadkii 2012kii ayaa maanta lagu fuliyay xukun dil ah oo maxkamadi ku xukuntay. Afartan oo nin oo lagu kala magacaabo Akshay Thakur, Vinay Sharma, Pawan Gupta iyo Mukesh Singh ayaa maanta la daldalay. Gabadha...
Xildhibaano kamid ah Barlamaanka G/mudug oo wada xil ka qaadista C/kariim Xuseen Guuleed.
Xildhibaannada dowlad gobolleedka Galmudug oo ku shirsan magaalada Cadaado ee xarunta KMG ah u ah dowlad gobolleedka Galmudug ayaa cod u qaadaya mooshin xil ka qaadis ah oo dhawaan laga keenay madaxweynaha maamulka Cabdikariin Xusseen Guulleed. Fadhiga baarlamanka Galmudug waxaa shir guddoominaya guddoomiye ku-xigeenka koowaad Xareed Cali Xareed, waxaana warar...
Faah faahin dheeraad ah oo kasoo baxeysa dagaal gobolka SH/hoose ku dhexmarey ciidamada Ethoipia iyo dagaalyahanada AL-shabaab.
Ugu yaraan 11-qof ayaa ku geeriyooday tiro intaas ka badanna way ku dhaawacmeen kaddib dagaal culus oo ciidan ka tirsan kuwa Itoobiya ee AMISOM iyo xoogagga Al-shabaab shalay ku dhex-maray deegaanka Yaaq-bari-weyne ee Gobolka Shabeellada Hoose. Iska-horimaadkan oo qarxay kaddib markii Xoogagga Al-shabaab ay Weerar Gaadmo ah la beegsadeen Kolonyo...
Warbixin Dhawaan ay Soo Saareen Gudiga Maaliyada Barlamaanka oo ay Ku Kala Qaybsameen Isla Guddigaasi.
Ilaa 10 xubnood oo ka tiran guddiga Maaliyada Golaha Shacabka ayaa ka hor yimid islamarkaana sheegay in aysan waxba kala socon warbixintii dhawaan ay shaaciyeen xubnaha guddiga Maaliyada iyo Miisaaniyada u qaabilsan Golaha Shacabka. Qoraal ay xubnahan u qoreen guddoonka Golaha Shacabka ayeey ku sheegeen in ay cabasho ka yihiin...
1...757758759...765Page 758 of 765